Catzz Ikati Ibhedi - Imagazini yoyilo
Ikati Ibhedi Xa kuyilwa ibhedi yekati yeCatzz, inkuthazo yatsalwa kwiimfuno zeekati kunye nabanini ngokufanayo, kwaye kufuneka imanyanise umsebenzi, ukulula kunye nobuhle. Ngelixa bejonga iikati, iimpawu zabo ezizodwa zejiyometri zikhuthaze ifom ecocekileyo neyaziwayo. Ezinye zeendlela zokuziphatha (umz.Ukuhamba kweendlebe) ziye zabandakanywa kumava omsebenzisi wekati. Kwakhona, kuthathelwa ingqalelo abaniniyo, injongo yayikukwenza ifenitshala abanokuyenza kwaye babonise ngokuzingca. Ngaphezu koko, kwakubalulekile ukuqinisekisa ulondolozo olulula. Zonke ezo zinto ziyilelayo, uyilo lwejometri kunye nolwakhiwo lweemodyuli.
Igama leprojekthi : Catzz, Igama labayili : Mirko Vujicic, Igama lomthengi : Mirko Vujicic.
Ikati Ibhedi Mirko Vujicic Catzz